China High Quality Polycarbonate Solid PC Bhodhi Simba Bhodhi fekitori uye vagadziri | Bonai
Kupinda mukati: chiyero chekupinda chakakwira, icho chinogona kusvika 25% uye 86% mune akasiyana mavara.
Impact kuramba: iko kusimba kwekukanganisa mukoramu isina hove inguva makumi masere pane yegirazi.
Simba: Mushure memaawa mazana mana emakumi ekumhanyisa bvunzo dzekukwegura, Yi ari 2 uye LT iri 0.6%
Nekudaro, mushure memakore gumi ekushandisa, yakakwira yekupinda mareti uye yakaderera yeyero mazinga anogona kuchengetwa.
Kudzivirirwa pamwaranzi yeultraviolet: PC mwenje yezuva inogadziridzwa mumatatu macompact anofukidza pamusoro nehurefu hweiyo ultraviolet absorber uye inogona kuchengetedza kwenguva refu kuramba, Ichi chinyorwa chinogona kuchengetedza zvakanaka uye zvakashata zvimiro zvemuviri pakati pe40 ne120 degrees.
Kukwanisika kwakanaka: kunogona kutemwa nenzira iyi kana nekufona, hapana maturusi akakosha anodikanwa, hushoma bend benduru ndeye 175 nguva yakafara.
Kuchengetedza kwezwi: yepakati mweya mamiriro, polyurethane kurira kwekusimbisa, inokwanisa kudzikisira ruzha.
Kurema kwechiedza: huremu hwenzvimbo ine mhango ndi1 / 12 yehuremu hwakaenzana hwegirazi gobvu.
PC sunshine, barras huecas de policarbonato, cápsulas de cristal, desarrollo de poliésteres ácidos, nezvimwe.
(1) Chiedza chekutumira: Iyo mwenje kutumira kwePC bhodhi inogona kusvika kusvika ku89%, inoyevedza segirazi. UV-yakavharwa mapaneru haigone kuburitsa yero, atomization uye isina kunaka mwenje kufambiswa pasi pezuva. Mushure memakore gumi, kurasikirwa kwechiedza kutapurirana kuri chete 6%, iyo kurasikirwa kweiyo PVC yakakwira se15% -20%, uye girazi fiber iri 12% -20%.
(2) Impact kuramba: Iyo simba rekukanganisa iri 250-300 nguva yegirazi yakajairwa, ka30 iyo yeaakisi machira eiyo imwe ukobvu, uye ka2-20 nguva yegirazi rakadzikama. Hapana chinotsemuka kana chakadonhedzwa mamita maviri pasi penyundo ye3kg. Mukurumbira we "girazi" uye "simbi inonzwika".
(3) Anti-ultraviolet: PC bhodhi yakafukidzwa neanti-ultraviolet (UV) kupfeka kune rumwe rutivi uye anti-condensation kurapwa kune rimwe divi, iyo inosanganisa anti-ultraviolet, kupisa kupisa uye anti-kudonhedza mabasa. Inogona kuvhara ultraviolet mwaranzi kubva kupfuura nepakati, uye inokodzera kudzivirira yakakosha artworks uye kuratidzira kubva kune ultraviolet mwaranzi.
(4) Kurema kwechiedza: iyo giravhiti yakatarwa inongova hafu yegirazi, ichiponesa mutengo wekufambisa, kubata, kuisa uye kutsigira furemu.
Pashure: Polycarbonate Plastiki / Hollow Sheet Zvivakwa Zvekuvakisa
PC Yakasimba Sheet
Plastiki Pc Sheet